Drupal: Tutorials uye ruzivo nezve iyo CMS kana Sisitimu - Ikkaro
kudzidziswa >> Webmaster >> Drupal
Tichaona mashandisiro eDrupal mushanduro dzayo dzakasiyana Drupal 7, 8 uye Drupal 9 inova ichangoburwa.
Drupal haisi CMS yakapusa kutanga nayo, kunyange iine sarudzo dzakawanda uye yanga iri sarudzo yemapurojekiti makuru.
Ndakagara ndichifarira simba rayo uye kuita kwakawanda, uye ndinoramba ndichiongorora zvatingaite nehurongwa. Uye munguva pfupi yapfuura ndiri kunyanya kufarira kuti zvakanaka sei kune SEO mapurojekiti.
Ndinoreurura izvo nguva dzose Ndanga ndichidanana naDrupal. Asi ini ndangosiya izvo zviri nyore zveWordPress.
Pfungwa yakajairika yasara ndeyekuti Drupal inoshandiswa kune makuru mapurojekiti uye WordPress kune ese marudzi emapurojekiti. Asi kana zviri nyore senge rako bhurogu, webhusaiti webhusaiti, chitoro chidiki, nezvimwe, zvirinani kushandisa WordPress.
Kana iwe usingazive Drupal zvakakwana, tsvaga chii
Uye ndeyekuti WordPress inokwanisa kuisa, kugadzirisa uye kuishandisa chero munhu. Uye zvinoenderana nemapulagi isu tinogona kuzvipa akawanda mashandiro uye nekushandura kubva kune ecommerce kuenda kune LMS kana static webhusaiti. Nekudaro, iko kunzwa uko Drupal kunopa kune mushandisi uyo anotanga sa webmaster kuri kutyisa.
Chii chinonzi Drupal
Drupal ndeye CMS yekuvaka masimba mawebhusaiti. Kufanana nemamwe marongero eCMS, Drupal ine modular interface inobvumira vanogadzira kuti vagadzirise uye vawedzere iyo CMS system.
Icho chikuru chemukati manejimendi manejimendi, yakasimba sisitimu yewebhu kunyorera, uye kunyangwe rakakura revanhu kutsikisa chikuva.
NaDrupal isu tinogona kuvaka chero chinhu chatinofungidzira.
Yako webhusaiti nenharaunda ndizvo Drupal.org kuve Drupal chiratidzo chakanyoreswa nekutengesa naDries Buytaert